RASMI: Garsooraha Kulanka Barca vs Chelsea Oo La Shaaciyay – Yuusan U Fiicneen Labada Koox? %
Xiriirka kubada cagta qaarada Yurub ee UEFA, ayaa ku dhawaaqay in garsoore Damir Skomina, uu noqon doono midka dhex-dhaxaadin doona lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League, kulanka Barcelona iyo Chelsea.
Ciyaarta oo ka dhici doonta habeenka Arbacada Camp Nou, ayaa ninkaan reer Slovenia ay utahay markiisii labaad ee uu soo booqday xagaagan, isagoona horey soo qabtay kulankii ay Barca 3-0 dirtay Juventus heer Group-yada.
Sidoo kale, wuxuu soo Garsoorey kulankii ay fasal ciyaareedkan kooxda kubada cagta Chelsea, kula soo dheeshay wareega Group-yada dhigeeda AC Roma, gaara ahaan ciyaartii ay wada galeen labadaan kooxood Bareejo 3-3.
Wuxuu kusoo biiray Garsoorahaan heerka caalamiga ah sanadkii 2003-kii, waana 41-sano jir, kaasoo ku dhawaad ama wax ka badan 40 kulan oo tartanka xiisaha leh Champions League ah kasoo muuqday ama Garoose ka noqday.
Xaqiiqadii, Skomina waa mid qiimayn fiican oo balaaran leh, waxaana uu kamid noqon karaa Garsoorayaasha reer Yurub, kuwaasoo loosoo xulan karo inay Seeriga qabtaan kulamada koobka aduunka ee xili ciyaareedkan.
Geesta kale, ninka udhashay wadanka Ingiriiska, ee Michael Oliver, ayaa loosoo xushay inuu noqdo mid dhex-dhaxaadiya ciyaarta lugta labaad oo ay habeenka Arbacada ka hortagayso Bayern Munich dhigeeda Besiktas.